BigCommerce Inozivisa Nyowani Ecommerce Chikamu pane themeForest | ECommerce nhau
BigCommerce Inozivisa Nyowani Ecommerce Chikamu pane themeForest
Susana Maria Urbano Mateos | | StartUps uye vanamuzvinabhizimusi, Zvidzidzo uye zviwanikwa
BigCommerce, inova ndiyo inotungamira e-commerce chikuva chekutenga nekutengesa zvigadzirwa zvekugadzira, ichangobva kuziviswa a Ecommerce chikamu pane themeForest. Kubudikidza nekubatana uku, vagadziri vemusoro wenyaya vachange vawedzera mukana weBigCommerce uye neyakagadziriswa dhizaini dhizaini.
BigCommerce, iyo nyowani Ecommerce chikamu pane themeForest
Kune avo chikamu, vatengesi vachave nemikana mitsva yeku tora mukana kune chaiwo ecommerce Themes kuva nekutengesa kwepamhepo kwepamusoro. ThemeForest ichapa vatengesi mukana wekuwana akasiyana siyana emhando yepamusoro Themes, iyo ichavakirwa zvakanangana neBigCommerce chikuva.
Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kugadzira iyo yakashambadzirwa webhusaiti yakagadzirirwa bhizinesi Pachave nemikana yakawanda yekuwedzera yeiyo Envato theme nharaunda nharaunda inotarisa kugadzira zvigadzirwa kunyanya zve BigCommerce chikuva.
Izvo zvinofanirwa kutaura kuti kubvira payakatangwa muna 2006, iyo Envato nharaunda yakagadzira inodarika $ 490 mamirioni vachitengesa zvinhu zvemadhijitari. ThemeForest Ichowo chimwe chema 300 mawebhusaiti anonyanya kushanyirwa munyika.
Inopa ku Themes vagadziri veBigCommerce, kuwana kune vazhinji vateereri vevanogona kutenga. Naizvozvo, kuburikidza ino saiti, vagadziri vanogona ikozvino kutora mukana weiyo nyowani BigCommerce theme dhizaini kugadzira yakasarudzika sitiroko, inesimba uye ine simba mitezo yakanangana neBigCommerce.
Chikamu cheBigCommerce paTemetForest Ichave ine kusarudzwa kwePlatform-yakagadziriswa Themes, imwe neimwe iine mushandisi-inoshamwaridzika uye inoteerera dhizaini, zvinhu zvemazuva ano, masitayera ekumisikidza ekutsigira akawanda akamira ezvikamu, pamwe nerutsigiro rweadiki, epakati, uye makuru makuru.
YeBigCommerce, izvi kubatana neTemetForest inovabvumidza kupa vatengesi nzvimbo iri nyore yekuwana yavo e-commerce chikuva. Iyo inobvumira iyo themeForest nharaunda kuti ishandise yayo chidimbu-inotungamira dhizaini dhizaini nenzira yekuti ivo vagone ikozvino kujoina imwe yeanokurumidza kukura ecosystems muecommerce.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » BigCommerce Inozivisa Nyowani Ecommerce Chikamu pane themeForest
Ralph Lauren achachinja iro Ecommerce zano kuvandudza kutengesa
WeChat inoronga kuwedzera yayo Ecommerce chikuva muEurope